मोर्चा संविधानबाट नहट्ने | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← प्रदर्शनकारीलाई रुट र समय निर्धारण
प्रमुख दलबीच भएको सहमति अक्षरश: लागु हुनैपर्छ : कङ्ग्रेस महामन्त्री →
काठमाडौं, जेठ ५ -एकीकृत माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। पहिचान सहितको संघीयता नभए सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिएको मोर्चाले माओवादीसँग आफूहरू शान्ति र संविधान निर्माणकै पक्षमा रहने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।
बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा मोर्चाले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया नछाड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। पहिचानबिना ११ प्रदेशको निर्णयमा मोर्चाले असहमति दोहोर्‍याएको छ।
११ प्रदेशलाई जातीय पहिचान दिनुहुन्न भन्ने निर्णय नभएकाले छलफलबाट अघि बढ्ने सहमति भएको छ। कांग्रेस र एमालेका कारण पहिचान बिनाको प्रदेशमा सहमति भएकाले त्यसलाई मुद्दा नबनाउन माओवादीले मोर्चालाई आग्रह गरेको थियो।
बालुवाटारमा बिहान तीन दलसँगको छलफलपछि माओवादी-मोर्चा छुट्टै वार्ता भएको थियो। तीन घन्टा चलेको वार्तामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मोर्चाका नेताहरूसँग कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।
बालुवाटार स्रोतले दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नागरिकसँग भन्यो, ‘तपाईंहरू शान्ति, संविधान निर्माण छोडेर बाहिर कहाँ जान खोज्नुभएको? के तपाईंहरूको जिम्मेवारी छैन? संविधान बने सबै रहिन्छ, नभए सबै हुँदैनौं।’
सबैलाई जनताले चुनेर पठाएकाले जनताबाट कोही भाग्न नसक्ने तर्क दाहालले गरेका थिए। ‘पहिचान बिनाको संघीयता हुँदैन भन्ने तर्क गलत छ, त्यस’bout छलफल हुन बाँकी छ, अहिले कुन परिस्थितिमा सहमति गरिएको छ सबैले बुझ्नु भएकै छ, सरकार, संविधानसभा छोड्छौं भन्नुहुन्छ, जेठ १४ मा संविधान नबनाएर जनताका अगाडी कसरी जानुहुन्छ?’ दाहालले प्रश्न गरे।
मोर्चाका नेताहरूले आफूहरू शान्ति र संविधान विरोधी नभएको दोहोर्‍याएका थिए। पहिचानबिनाको प्रदेश आफूहरूलाई मान्य नहुने धारणा राखेको स्रोतले बतायो। सहमतिअनुसार आगामी बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा आफ्नो हैसियत के हुने’bout मोर्चाले माओवादीसँग प्रश्न गरेको थियो।
‘शान्ति र संविधानबाट बाहिर जाँदैनौं भन्ने बारम्बार दोहोर्‍याए, पाँचबुँदे सहमतिको एक शक्ति मोर्चा पनि रहेकाले आगामी नयाँ नेतृत्व सरकारमा अहिलेकै अवस्था यथावत हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखे,’ स्रोतले भन्यो।
‘पहिचानबिनाको संघीयता हामीलाई मान्य हुँदैन भन्नेमा छलफल भयो। अहिले पहिचानबिना ११ प्रदेशमा सहमति भएको कांगे्रस र एमालेका कारण हो, माओवादीले एजेन्डा छाडेको छैन भन्ने उहाँहरूले प्रष्ट पार्नुभयो’, मोर्चाका नेता तथा भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने।
संविधानसभा सार्वभौम सम्पन्न भएकाले विषयगत समितिबाट पारित निर्णय अस्वीकार गर्नु जनमतको अपमान भएको त्रिपाठीले बताए। ‘सार्वभौम सम्पन्न संविधानसभाका विषयगत समितिले गरेका निर्णयबाहेक अर्को विचार प्रत्युपादन गर्न कसैले सक्दैन भन्ने छलफल भयो,’ त्रिपाठीले भने।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मोर्चा समेतको संलग्नमा ५ बुँदे सहमति भए पनि तीन दलबाट जुन ढंगले पहिचानबिना प्रदेशमा सहमति गरियो त्यो प्रक्रियामा आफ्नो असहमति रहने त्रिपाठीले बताए।
‘११ प्रदेश त्रिदलीय सहमति हो, हामीले स्वीकार गरेका छैनौं, पाँचबुँदेका आधारमा भएको नयाँ सहमतिमा हाम्रो पनि स्वीकार्यता हुनुपर्छ भनिएको हो,’ उनले भने।
११ प्रदेशमा सहमत भए पनि मोर्चाले पहिचानको आधार भने छोडेको छैन। पहिचानको आधारमा संघीय प्रदेश नबने सरकार, संविधानसभा छाड्ने ’bout मोर्चामा छलफल चलेको उनले बताए। ‘हाम्रो माग सम्बोधन नभए सरकार र संविधान सभा छोड्ने छलफल भएको हो,’ त्रिपाठीले भने।
विषयगत समितिले टुंग्याएका विषय छाडेर जान नसकिने भएकाले पहिचानको मुद्दामा छलफल गरेर अघि बढ्ने माओवादीसँग सहमति भएको उनले बताए।